Robert Mugabe resigns: Celebrations in Zimbabwe [Photos] - BelfastTelegraph.co.uk
Zimbabweans celebrate after hearing the news that President Robert Mugabe had resigned, in Harare, Zimbabwe Tuesday, Nov. 21, 2017. Mugabe resigned as president with immediate effect Tuesday after 37 years in power, shortly after parliament began impeachment proceedings against him. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A man wearing the national flag celebrates in the streets after the resignation of Zimbabwe's president Robert Mugabe on November 21, 2017 in Harare. Car horns blared and cheering crowds raced through the streets of the Zimbabwean capital Harare as news spread that President Robert Mugabe, 93, had resigned after 37 years in power. / AFP PHOTO / Jekesai NJIKIZANAJEKESAI NJIKIZANA/AFP/Getty Images
Zimbabweans living in South Africa celebrate in the streets of the district of Hillbrow in Johannesburg after the resignation of Zimbabwe's president Robert Mugabe, on November 21, 2017. The announcement came after days of mounting pressure on the 93-year-old leader, whose long and authoritarian rule made him feared by many of his citizens. / AFP PHOTO / WIKUS DE WETWIKUS DE WET/AFP/Getty Images
Zimbabwean soldiers are celebrated by citizens in the streets in Harare, on November 21, 2017 after the resignation of Zimbabwe's president Robert Mugabe. Car horns blared and cheering crowds raced through the streets of the Zimbabwean capital Harare as news spread that President Robert Mugabe, 93, had resigned after 37 years in power. / AFP PHOTO / MARCO LONGARIMARCO LONGARI/AFP/Getty Images
Zimbabweans living in South Africa celebrate the resignation of Zimbabwe's president Robert Mugabe in the streets of the district of Hillbrow in Johannesburg on November 21, 2017. The announcement came after days of mounting pressure on the 93-year-old leader, whose long and authoritarian rule made him feared by many of his citizens. / AFP PHOTO / WIKUS DE WETWIKUS DE WET/AFP/Getty Images
Zimbabwean national sburnsa shirt of the Zimbabwe's ruling party, the Zimbabwe African National Union Patriotic Front (ZANU PF), as hundreds of Zimbabweans living in South Africa celebrate the resignation of Zimbabwe's president Robert Mugabe in the streets of the district of Hillbrow in Johannesburg on November 21, 2017. The announcement came after days of mounting pressure on the 93-year-old leader, whose long and authoritarian rule made him feared by many of his citizens. / AFP PHOTO / WIKUS DE WETWIKUS DE WET/AFP/Getty Images
A Zimbabwean national burns a shirt of the Zimbabwe's ruling party, the Zimbabwe African National Union Patriotic Front (ZANU PF), as hundreds of Zimbabweans living in South Africa celebrate the resignation of Zimbabwe's president Robert Mugabe in the streets of the district of Hillbrow in Johannesburg on November 21, 2017. The announcement came after days of mounting pressure on the 93-year-old leader, whose long and authoritarian rule made him feared by many of his citizens. / AFP PHOTO / WIKUS DE WETWIKUS DE WET/AFP/Getty Images
A man holds up the national flag of Zimbabwe as Zimbabwean soldiers are celebrated by citizens in the streets in Harare, on November 21, 2017 after the resignation of Zimbabwe's president Robert Mugabe. Car horns blared and cheering crowds raced through the streets of the Zimbabwean capital Harare as news spread that President Robert Mugabe, 93, had resigned after 37 years in power. / AFP PHOTO / MARCO LONGARIMARCO LONGARI/AFP/Getty Images
TOPSHOT - Zimbabwe's speaker of parliament Jacob Mudenda (C) receives the news that president Robert Mugabe resigned on November 21, 2017 at the parliament in Harare. / AFP PHOTO / Marco LONGARIMARCO LONGARI/AFP/Getty Images
Zimbabweans gather for a demonstration calling for the resignation of Zimbabwe's president Robert Mugabe in front of the Zimbabwe parliament in Harare on November 21, 2017. Robert Mugabe resigned as Zimbabwe's president on November 21, swept from power as his 37-year reign of autocratic control and brutality crumbled within days of a military takeover. The move looks set to end Zimbabwe's worst political crisis since it won independence from Britain in 1980. / AFP PHOTO / MARCO LONGARIMARCO LONGARI/AFP/Getty Images
A deacon holds a banner during a demonstration calling for the resignation of Zimbabwe's president Robert Mugabe in front of the Zimbabwe parliament in Harare on November 21, 2017. Robert Mugabe resigned as Zimbabwe's president on November 21, swept from power as his 37-year reign of autocratic control and brutality crumbled within days of a military takeover. The move looks set to end Zimbabwe's worst political crisis since it won independence from Britain in 1980. / AFP PHOTO / MARCO LONGARIMARCO LONGARI/AFP/Getty Images
A Zimbabwean woman kneels on the national flag of Zimbabwe in a street in Harare, on November 21, 2017 after the resignation of Zimbabwe's president Robert Mugabe. Car horns blared and cheering crowds raced through the streets of the Zimbabwean capital Harare as news spread that President Robert Mugabe, 93, had resigned after 37 years in power. / AFP PHOTO / MARCO LONGARIMARCO LONGARI/AFP/Getty Images
TOPSHOT - A Zimbabwean soldier sitting in tank gestures as people greet and celebrate after the resignation of President Mugabe in Harare on November 21, 2017. Zimbabwe army chief General Constantino Chiwenga called on November 21, 2017 for "maximum restraint" and law and order to be upheld after Robert Mugabe's resignation sparked wild celebrations and plunged the country into uncertainty. Mugabe resigned as Zimbabwe's president swept from power as his 37-year reign of autocratic control and brutality crumbled within days of a military takeover. / AFP PHOTO / MARCO LONGARIMARCO LONGARI/AFP/Getty Images
Members of the House of Assembly sit inside the Zimbabwean Parliament in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Nov. 21 2017. Parliament convened as the ruling party seeks to impeach President Robert Mugabe after nearly four decades in power. (AP Photo/Aaron Ufumeli)
TOPSHOT - People celebrate with Zimbabwe Defence Force soldiers on a tank in the streets of Harare, after the resignation of Zimbabwe's president Robert Mugabe on November 21, 2017. The bombshell announcement sparks scenes of wild celebration in the streets of Harare, with car horns honking and crowds dancing and cheering over the departure of the autocrat who has ruled Zimbabwe since independence. / AFP PHOTO / Tony KARUMBATONY KARUMBA/AFP/Getty Images
TOPSHOT - People and soldiers celebrate after the resignation of Zimbabwe's president Robert Mugabe on November 21, 2017 in Harare. Car horns blared and cheering crowds raced through the streets of the Zimbabwean capital Harare as news spread that President Robert Mugabe, 93, had resigned after 37 years in power. / AFP PHOTO / Marco LongariMARCO LONGARI/AFP/Getty Images
Harare residents celebrate in the streets after the resignation of Zimbabwe's president Robert Mugabe on November 21, 2017. The bombshell announcement sparks scenes of wild celebration in the streets of Harare, with car horns honking and crowds dancing and cheering over the departure of the autocrat who has ruled Zimbabwe since independence. / AFP PHOTO / MUJAHID SAFODIENMUJAHID SAFODIEN/AFP/Getty Images
TOPSHOT - A man holds a Mozambican Liberation Movement (FRELIMO) flag and a poster with the portrait of former Zimbabwean deputy President Emmerson Mnangagwaafter removing the portrait of former Zimbabwean President Robert Mugabe from the wall at the International Conference centre, where parliament had their sitting, after his resignation on November 21, 2017 in Harare. Robert Mugabe resigned as president of Zimbabwe on November 21, 2017 swept from power as his 37-year reign of brutality and autocratic control crumbled within days of a military takeover. The bombshell news was delivered by the parliament speaker to a special joint session of the assembly which had convened to impeach Mugabe, 93, who has dominated every aspect of Zimbabwean public life since independence in 1980. / AFP PHOTO / Jekesai NJIKIZANAJEKESAI NJIKIZANA/AFP/Getty Images
Zimbabweans celebrate with soldiers on a military tank after hearing the news that President Robert Mugabe had resigned, in Harare, Zimbabwe Tuesday, Nov. 21, 2017. Mugabe resigned as president with immediate effect Tuesday after 37 years in power, shortly after parliament began impeachment proceedings against him. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Harare residents celebrate in the streets after the resignation of Zimbabwe's president Robert Mugabe on November 21, 2017 in Harare. The bombshell announcement sparks scenes of wild celebration in the streets of Harare, with car horns honking and crowds dancing and cheering over the departure of the autocrat who has ruled Zimbabwe since independence. / AFP PHOTO / MUJAHID SAFODIENMUJAHID SAFODIEN/AFP/Getty Images
A Zimbabwean soldier sitting in tank gestures as people greet and celebrate after the resignation of President Mugabe, on November 21, 2017. Zimbabwe army chief General Constantino Chiwenga called on November 21, 2017 for "maximum restraint" and law and order to be upheld after Robert Mugabe's resignation sparked wild celebrations and plunged the country into uncertainty. Mugabe resigned as Zimbabwe's president swept from power as his 37-year reign of autocratic control and brutality crumbled within days of a military takeover. / AFP PHOTO / MARCO LONGARIMARCO LONGARI/AFP/Getty Images
An armed Zimbabwean soldier patrols in the street of Harare as the population celebrates after the resignation of President Mugabe, on November 21, 2017. Robert Mugabe resigned as Zimbabwe's president on November 21, 2017, swept from power as his 37-year reign of autocratic control and brutality crumbled within days of a military takeover. The move looks set to bring an end to Zimbabwe's worst political crisis since the country won independence from Britain in 1980. / AFP PHOTO / MARCO LONGARIMARCO LONGARI/AFP/Getty Images
Zimbabwean celebrate in a bar, as they play billiards in the township of Mbare in Harare, after the resignation of President Robert Mugabe, on November 21, 2017. The bombshell announcement sparks scenes of wild celebration in the streets of Harare, with car horns honking and crowds dancing and cheering over the departure of the autocrat who has ruled Zimbabwe since independence. / AFP PHOTO / MARCO LONGARIMARCO LONGARI/AFP/Getty Images
Zimbabwean celebrate in the street of Harare, after the resignation of Zimbabwe's president Robert Mugabe on November 21, 2017 in Harare. The bombshell announcement sparks scenes of wild celebration in the streets of Harare, with car horns honking and crowds dancing and cheering over the departure of the autocrat who has ruled Zimbabwe since independence. / AFP PHOTO / MARCO LONGARIMARCO LONGARI/AFP/Getty Images